Nanamaloka ny andro iraisampirenena ho an’ny zon’ny vehivavy tao Jamaika ny nampihenana ny sazin’ilay pasitera voaheloka ho nanao firaisana ara-nofo tamin’ny zaza tsy ampy taona · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Claire Sartori
Voadika ny 30 Avrily 2018 9:03 GMT
Mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny tafika ampongatapaka nandeha teo anoloan'ny fiangonana Moraviana nandritra ny diabe fanoherana ny herisetra ara-nofo tamin'ny volana martsa 2017. Sary avy amin'i Storm Saulter, sary nahazoana alalana.
[Miverina amin'ny tranonkala amin'ny teny anglisy ny rohy rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity]
Nahomby ny fankalazan'ireo Jamaikana ny Andron'ny Zon'ny Vehivavy tamin'ity taona ity tamin'ny fikarakarana hetsika maro sy fandefasana hafatra mahafinaritra nameno ny tambajotra sosialy. Saingy niato ny fankalazana tamin'ny mitataovovonana rehefa tonga ny vaovao: Pasiteran'ny fiangonana môraviana taloha, [Fiangonana protestanta mampiray ny mpirahalahy Moraviana ao Jamaika] Rupert Clarke, voaheloka higadra 8 taona an-tranomaizina, noho ny fiampangana roa “fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny zaza tsy ampy taona”. Tamin'ny novambra 2017, niaiky heloka ho nanao firaisana ara-nofo tamin'ny roa mirahavavy i Clarke, samy latsaky ny enina ambinifolo taona izy roa ireo tamin'ny nisehoan'ny tranga.
Naneho ny tsy fankasitrahany izay heveriny fa sazy maivana ireo mpisera aterineto, ambany lavitra amin'ny 15 taona ambony indrindra amin'ny tranga toy izany ny sazy. Ny fampihenan-tsazy azon'i Rupert Clarke dia avy tamin'ny fanapahan-kevitra vao haingana navoakan'ny minisiteran'ny fitsarana, mba hanafainganana ny fitsaràna eo amin'ny tribonaly, dia manome sazy fohifohy kokoa amin'ireo izay miaiky heloka.
Nanambara ny lefitry ny lehiben'ny fampanoavana (DPP) Adley Ducan fa ny fampihenàna 50% ny sazin'i Rupert Clarke, dia noho ny fiaiken'ity pasitera moraviana taloha ity ny nanaovany firaisana ara-nofo tamin'ny tovovavy tsy ampy taona roa, ho voasazy 8 taona an-trano maizina fotsiny.
Mampitombo ny fifandirana sy ny ahiahy ny tetika fampihenàna sazy, indrindra taorian'ny tranga famonoana olona nalaza be izay niteraka sazy 15 taona an-tranomaizina tamin'ny desambra 2017:
Atao andrana ny fampihenana sazy mba ahafahana manafaingana ny fitsarana
Niteraka hetsika feminista hiringiriny antsoina hoe “tafika ampongatapaka” (anarana nomena taorian'ny namelezan'ny mpikatroka iray tamin'ny amponga tapaka ny lohan'ilay lehiben'ny Fiangonana Môraviana, Dr. Paul Gardner, nandritra ny hetsi-panoherana manohitra ny fitondran-tenan'i Rupert Clarke) ny olan'ny tompon'andraikitry ny fiangonana manararaotra ara-nofo amin'ireo ankizivavy.
Niteraka krizy teo amin'ny fiangonana moraviana na tany Jamaika na tany amin'ireo nosy Caïmans iny raharahan'ity pasitera ity. Vehivavy no mitantana ny fiangonana amin'izao fotoana izao, dia ny Révérend Phyllis Smith Seymour, izay voatendry tamin'ny Janoary 2017 taorian'ny fialan’ny filohany Atoa Dr. Paul Gardner sy ny filoha lefitra Atoa Jermaine Gibson taorian'ny fanamelohana azy ireo ho manararaotra ara-nofo sy mikitikitika faritra saropady.
Raha ampitahaina amin'ny fitantaram-baovao misesisesy tamin'ny fanamelohana an'i Rupert Clarke, dia lasa malina kokoa ireo haino aman-jery nentim-paharazana amin'izao.
Jamaikana iray no mamintina ny fahatsapan'ny maro
Nahazo kapoka kely teo amin'ny tanany fotsiny ilay Pasitera Moraviana tsy mendrika Rupert Clarke amin'ny fanamelohana azy ho 8 taona monja any am-ponja. Notapahany tamin'ny fomba miharihary ny fitokisana sy ny fanajan'ny vahoaka, izay nitodika tany aminy nitady fanohanana sy torohevitra ara-maoral amin'ny maha olon'ny fiangonana azy.
Ny iray nanoratra tao amin'ny Facebook [rohy tsy afaka idirana]
8 taona am-ponja monja? Zava-misy mampalahelo amin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy !! Tsy izany ny fandrosoana !!
Nampidirina tao anatin'ny rejisitry ny nandika lalàna ara-nofo ao amin'ny firenena, izay napetraka tamin'ny taona 2014 ny anaran'ilay pasitera. Na izany aza, tsy azon'ny besinimaro jerena ny rejistra. Fa tehirizina ao amin'ny biraon‘ny sampan-draharahan'ny fonja, izay nilaza ho manara-maso ireo mpandika lalàna amin'ny alàlan'ireo sampana isam-paritra izany rejisitra izany. Tsy mahagaga raha tsy nisy fiantraikany be ilay hetsika: Ny lahatsoratra iray vao haingana tamin'ny 2017 dia nanamarika fa tsy misy orinasa na olon-tsotra nampitaha ny anarana tamin'izay tafiditra ao anatin'ny rejisitra.
Mbola mijanona ho toe-javatra manahirana ny vehivavy jamaikana ny fahazarana mandre fanolanana sy ny fanohintohinana ara-nofo. Mpisera twitter iray naneho hevitra:
Tadidiko fa nisy ramatoa iray namako nilaza tamiko fa niharan'ny herisetra ara-nofo izy. Ho famintinana, nifarana tamin'ny fanesoan'ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana azy izany. Tsy miraharaha izay zavatra takany ny mpitandro filaminana.
Mpisera aterineto hafa no nizara ny ahiahiny mikasika ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny:
Makà fotoana hanafintohinana amin'ity didim-pitsarana ity, saingy tadidio fa ireo olona mahantra ireo no mety hiharan'ny fanararaotana indrindra any Jamaika, indrindra ireo vehivavy sy tovovavy sahirana. Ity ny tatitra. Andeha hampiasaintsika ny alahelontsika ary hiasa mba hiarovana azy ireo tokoa.
Mety hiharan'ny fampijaliana ataon'ny miaraka aminy ny vehivavy tsy afa-manoatra. Ny zanany, indrindra fa ny zanany vavy dia toy ny haza mora azo eo amin'ireo mpanadala zaza tsy ampy taona izay mahafantatra fa ny fahatsapana fahakivina no ahafahan'izy ireo mahazo ireo tovovavy ireo. Tezitra ianao mikasika ilay 8 taona an-trano maizina? Andeha ary isika hanao zavatra mikasika izany.
Ao anaty taratasin'ny mpamaky, nanoratra ny fikambanana mpiaro zon'olombelona ao Jamaika AIDS Support for Life fa mbola be ny zavatra tokony hatao hiarovana ny vehivavy:
Raha tsy afa-mamaha ny olan'ny fahantrana amin'ny maha-firenena isika, indrindra eo amin'ny vehivavy sy ny ankizy, dia hampaharitra ny tsingerin'ny fahantrana, ny tsy fitoviana, ny fanararaotana ara-nofo sy ny herisetra ao an-tokantrano fotsiny.
Tokony mihetsika ny manampahefana izao ary mandefa hafatra matanjaka ho an'ireo izay manohy manisy ratsy ny vehivavintsika sy ny tovovavy, fa efa tapitra ny fahanginana. Mangataka ny hamerenana handinihana ny fandaniana ny lalàna mifehy ny herisetra ara-nofo sy ny lalàna mifandraika amin'izany isika: ao anatin'izany ny lalàna momba ny herisetra an-tokantrano, ny fandikan-dalàna atao amin'ny olona, ​​ary ny fiarovana ny ankizy. Mangataka fanavaozana maika ny Lalàna momba ny asa (mari-karama mitovy ho an'ny lehilahy sy vehivavy) izay tsy mahomby amin'ny fanamaivanana ny tsy fitoviana mari-karama. Mandrisika ihany koa izahay ny fampandaniana haingana ny volavolan-dalàna momba fanorisorenana ara-nofo, tsy hoe iadiana amin'ny fanavakavahana ny lahy sy ny vavy any amin'ny toeram-piasana ihany fa koa mba hisorohana ny fanaovana ho ara-dalàna ny fanaovana ny vehivavy sy ny tovovavy ho kilalao.
Amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ity, mitaky ny lalàna mifehy ny fiarahamonina izahaysika ary manasazy ireo manohy manimba ny vehivavy. Mitaky varavarana misokatra bebe kokoa izahay hiantohana ny fahaleovantenan'ny vehivavy, na kilemaina izy ireo na tsia. Mitaky ny fivoarana isika mba hampiato ny endrika herisetra rehetra atao amin'ny vehivavy raha te hampihenana ny isan'ny olona 30.000 mitondra VIH/SIDA eto amin'ny nosy.
Rehefa tonga tamin'ny farany ny andro iraisampirenena ho an'ny vehivavy, dia miharihary fa any Jamaika farafahakeliny, mbola betsaka ny asa miandry hanampiana ireo vehivavy sy tovovavy marefo.